ကဒ်မက်စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂရိဒဏ္ဍာရီတွင် ကဒ်မက်စ် (အင်္ဂလိပ်: Cadmus; ဂရိ: Κάδμος Kadmos) သည် သီးဗာ ကို စတင်တည်ထောင်သူ၊ ပထမဆုံးသော ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ ကဒ်မက်စ်သည် ပါးဆီးယပ်စ်၊ ဘာလဲ့ရာဖန်တို့နှင့်အတူ ပထမဆုံးသော ဂရိသူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်၍ ဟဲရာကလီးဇ်ခေတ် မတိုင်မီ မိစ္ဆာသတ္တဝါများကို သုတ်သင်ရာ၌ အကြီးကျယ်ဆုံးသော သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်လေသည်။ ဘုရင် အဂျီးနော် နှင့် မိဖုရား တဲလစ်ဖာဆာတို့၏ သား၊ ဖာနီးရှာ(လူမျိုး)မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်သည်ဟု များသောအားဖြင့် ဖော်ပြကြကာ ယူရိုးပါ၊ ဆစ်လစ်၊ ဖီးနစ် တို့နှင့် ညီအကို မောင်နှမ တော်စပ်သည်။ ၎င်းကို မိဘများက ညီမဖြစ်သူ ယရိုးပါးကို ရှာဖွေ၍ တိုင်းယာဆိပ်ကမ်းဒေသသို့ ပြန်လည်စောင့်ကြပ်ခေါ်ဆောင်လာရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ ယခင်က ဖာနီးရှာကမ်းခြေတစ်လုတွင် ဇုစ်က သူမကို ဖျားယောင်သွေးဆောင်သွားခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရှေးကျသော ဖော်ပြချက်များတွင် ကဒ်မက်စ်နှင့် ယူရိုးပါတို့သည် ဖီးနစ်၏ သားသမီးများအဖြစ် ပြဆိုသည်။  ကဒ်မက်စ်သည် ဂရိမြို့ သီးဗာကိုတည်ထောင်ခဲ့ကာ သီးဗာရှိ ရဲတိုက်ခံတပ်ကို ၎င်းကိုဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့် ကဒ်မီးယာ ဟူ၍ မူလက အမည်ပေးထားခဲ့ကြသည်။
ကဒ်မက်စ်နှင့် နဂါး၊ , အနက်ရောင်ရုပ်ပုံပါ အမ်ဖရာရေတကောင်း၊ ဘီစီ ၅၆၀-၅၀၊ လူဗာပြတိုက်
(လက်ဘနွန်) ဆိုက်ဒန်မြို့၊ တိုင်းယာဆိပ်ကမ်းဒေသ၊ ဖာနီးရှာအရပ် (သို့) သီးဗာမြို့ (အီဂျစ်)
အဂျီးနော် နှင့် တဲလစ်ဖာဆာ (တီလဲ့ဖာဆာ) (သို့) ဖီးနစ် နှင့် ပဲရစ်မီးဒီ
ယူရိုးပါ၊ ဆစ်လစ်၊ ဖီးနစ်
ပေါလစ်ဒေါရပ်စ်၊ အောတော့နိုးယီ၊ အိုင်းနို၊ အာဂဗီ၊ ဆဲမစ်လီ
နဂါးကို တိုက်ခိုက်နေသော ကဒ်မက်စ်၊ ဟန်းဒရစ် ဂေါ့ဆီးယပ်စ်၏ လက်ရာ။
နဂါး၏ အစွယ်သွားများကို မျိုးကြဲချစဉ်၊ ရူးဗန်၏ လက်ရာ။
ကဒ်မက်စ်၏ ဇာတိချက်ကြွေမွေးရပ်မြေကို ရှေးခေတ်စာရေးဆရာများကြား အဓိကအားဖြင့် ကွဲလွဲကြသည်။ အေသင်မှ အပေါလိုဒေါရပ်စ်သည် ၎င်းကို ဖာနီးရှာ (ဆစ်မစ်တစ်လူမျိုးတစ်မျိုး) လူမျိုးဟု ဖော်ပြသည်။ သို့သော် များစွာသော အခြားဖော်ပြချက်များ၌ လက်ဘနွန်မီ တိုင်းယာ နှင့် အီဂျစ်မှ စီးဗာမြို့တို့ကို ဖော်ပြထား၏။ နိုင်းမြစ်စောင့်နတ် တစ်ဦးဖြစ်သော နီးလပ်စ်၏ စမီးများထဲကတစ်ဦးဖြစ်သော ကဒ်မက်စ်၏ မိခင်၊ သူမအမည်မှာ သီးဗာမြို့ဇာစ်မြစ်အမည်ပါရှိသောကြောင့် ရံခါ၌ သင့်တော်စေရန် ကဒ်မက်စ်၏ မိဘမျိုးရိုးကို ပြုပြင်ကြလေ့ရှိသည်။
↑ Alden, John B. (1883) The Greek Anthology, pp. 160–162.
↑ Kerenyi, Karl, 1959. The Heroes of the Greeks (London: Thames and Hudson) p. 75.
↑ A modern application of genealogy would make him the paternal grandfather of Dionysus, through his daughter by Harmonia, Semele. Plutarch once admitted that he would rather be assisted by Lamprias, his own grandfather, than by Dionysus' grandfather, i.e. Cadmus. (Symposiacs, Book IX, question II Archived 13 October 2008 at the Wayback Machine.)
↑ Scholia on Homer, Iliad B, 494, p. 80, 43 ed. Bekk. as cited in Hellanicus' Boeotica
↑ Smith၊ William, Sir, ed. (1870)။ Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology။ Boston: Little Brown and Company။ pp. 524။ ark:/13960/t9s17xn41။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကဒ်မက်စ်&oldid=700424" မှ ရယူရန်